Ku saabsan DaLian TekUgu badnaan
Dalian TekMax, oo la aasaasay 2005 oo leh caasimad diiwaangashan oo ah RMB20 milyan, waa shirkad hal-abuurnimo farsamo sare leh oo ku takhasustay la-talinta, naqshadeynta, dhismaha, tijaabinta, hawlgalka iyo dayactirka nidaamka bay'ada la kontoroolo. Tan iyo aasaaskii, shirkadda ayaa ku urursan berrinkii technology nadiifinta iyo maamulka codsiga, soo ururiyey talantiyo maamulka injineernimada nadiifinta ugu sareysa ee guriga in ka badan 80 qof, iyo sidoo kale shaqaalaha dhismaha xirfadeed ka badan 400 oo qof, iyo dhisay tiro kooxaha naqshadeynta iyo dhismaha oo leh tayo iyo heer sare.
Tirada shaqaalaha dhismaha ee xirfadda leh
Naqshadaynta injineernimada nadiifinta xirfadeed iyo awoodaha dhismaha
Awoodda naqshadeynta xirfadeed iyo dhismaha ee injineernimada daahirinta. Shirkaddu waxay ku urursanayd garoonka nadiifinta hawada waxayna u heellan tahay xakamaynta microenvironment gudaha sanado badan. Mashruucyada nadiifinta ee la hindisay oo la qabtay waxaa ka mid ah warshado sida elektiroonigga saxda ah, kiimikada noolaha, dawada iyo caafimaadka, waxsoosaarka warshadaha, cuntada iyo wixii la mid ah, oo leh naqshad xoog leh oo xirfad leh iyo karti dhisme mashaariicda nadiifinta.
Waxaan dhidibnay macmiil u ah "injineernimada nidaamsan qanacsanaanta macmiilka" waxaanna u dhignay hab maareyn tayo leh oo ganacsi oo ah "ku qanacsanaanta milkiilayaashu waa dabagalkayaga" bartilmaameedka. Waxaan sii wadi doonnaa inaan ku sii adkaysanno jihada horumarka ganacsi ee waarta oo deggan, si joogto ah hagaajinta maamulka, oo u dhiibo milkiilayaasha mashaariic iyo adeegyo tayo sare leh oo lagu qanci karo.
Waxaan ka helnay kalsoonida iyo taageerada macaamiisha
Tan iyo aasaaskeedii, oo leh teknolojiyad aad u fiican, dhisme saynis iyo nidaam maareyn tayo adag, TekMax wuxuu adeeg xirfadeed u fidiyay shirkado kala duwan oo caan ah, sida Akademiyada Sayniska ee Shiinaha, Hisense, Haier, Yili, Mengniu, Meihua, Nestle, Reyoung, Xiuzheng, CR Sanjiu, ZBD, TASLY, iwm.
U hoggaansanaanta ujeeddada meheradda ee "fikradda naqshadeynta horumarsan, xigashada mashruuca macquulka ah, tayada dhismaha oo aad u wanaagsan, gaarsiinta mashruuca waqtigeeda leh iyo iibinta daacadnimada leh" sanado badan, TekMax waxay qabatay boqolaal mashruuc oo daahirin ah, kuwaas oo dhammaantood ka helay kormeerka waaxaha awoodda leh , wuxuu oggolaansho ka helay waaxyo khuseeya, wuxuuna ka helay kalsoonida iyo taageerada macaamiisha sidoo kale.
Qolka Nadiifka ah, Sifaynta Unugga Hawada Cusub, Daaqadda Qolka nadiifka ah, Daaqadda Qolka Nadiifinta Qolka, Habka Biyaha Qaboojiyay, Qaboojiyaha Hawada Qolka nadiifka ah,